Mpamono Ilay Mpiaro Ny Zon’ny Indiana “Tsy Azo Atonina” Miriaria Malalaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2014 18:58 GMT
Fanoherana ny tsy fandraisan'andraikitr'ireo manampahefana amin'ny fanolanana ireo vehivavy Dalita tao amin'ny tanàna kelin'i Bhagana any Haryana. Sary avy amin'i Rajeev R Singh. Fizakàmanana Demotix. 11 May 2014.
Saika ao anatin'ny sokajin'ny ‘Dalita’, vondrom-piarahamonina heverina ho ivelan'ny rafitra sosialy, ny 25 isan-jaton'ny vahoaka Indiana. Vao avy nampitombo ny ezaka ataony ho fiarovana ireo vitsy an'isa toy ny Dalita sy ny vahoaka indizena ( fantatra amin'ny hoe Foko fanampiny na adivasis) ny mpitondra ao amin'ny firenena, nefa mbola iharan'ny fanavakavahana, fanilihana ary herisetra faobe ihany ireo vondrona ireo. Taona vitsivitsy izay dia nanomboka nandrakitra sy nitatitra ireo heloka bevava atao amin'ireo Dalita manerana an'i India ny tarika iray misy ireo iraky ny “Video Volunteer” miainga avy eny ifotony.
Naborak'i Kayonaaz Kalyanwala, mpandrindra ny Seraseran'ny Video Volunteers ao amin'ny lahatsoratra vao haingana fa :
Lazain'ireo atontan'isa avy aminà loharanom-baovao samihafa fa mitombo ny herisetra atao amin'ny Dalita. Voalazan'ny fanambaràna nataon'ny Minisi-panjakana momba ny Fiantohan'asa, Nitin Raut tamin'ny May 2014 fa nanatombo 548 ireo tranganà herisetra voarakitra tany Maharashtra nandritra ny taona 2013-2014 raha nampitahaina tamin'ny taona lasa.
Notafihan'olona enina i Sanjay Khobragade, Dalita iray mpikatroka mafàna fo avy ao amin'ny tanànan'i Kaulewada any Gondia distrikan'i Maharashtra ny marainan'ny 17 May. Resaka ady tany amin'ireo sokajy tsy mitovy no anton'ilay fanafihana feno habibiana. Raha iny natory teo an-tokotaniny iny i Khobragade no nodoran'ny mpanafika rehefa avy norarahana kerozena. 6 andro taty aoriana maty tao amin'ny hopitalin'i Nagpur, Maharashtra noho ny fery nahazo azy i Khobragade.
Nirakitra lahatsary fijoroana vavolombelona anefa i Khobragade talohan'ny nahafatesany. (Fampitandremana ho an'ny mpamaky: misy porofon-tsarim-pitarafana io lahatsary io.)
Nisambotra olona 6 noho ny fanambaran'i Khobragade ny mpitandro filaminana. Olona manana fifandraisana ara-politika matanjaka amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny Antoko Bharatya Janata, anefa ireo olona heverina ho nahavanon-doza ireo, ka nahavita nitantara fa i Devakabai vadin'i Khobragade ihany sy ilay lazaina fa sipany, mpitarika posiposy mahantra antsoina hoe Raju Gadpayle no namono azy rehefa fantany ny fiarahan'izy ireo.
Rehefa navotsotra ireo lehilahy notondroin'i Khobragade fa namono azy ireo dia nosamborin'ny mpitandro filaminana ny vadiny sy i Gadpayale ary nampijaliany mandra-pilazan'izy ireo fa ry zareo no nanao ilay heloka. Amin'izao fotoana izao dia afaka rehefa nandoa vola ireo lehilahy 6 nolazain'i Khobragade fa tompon'antoka tamin'ny famonoana azy, fa ny vadiny kosa no mbola any am-ponja.
“Tsy namono ny Raiko ny Reniko. Ataovy ny fanadihadiana ny Famonoana ilay Dalita Mpikatrka Mafàna Fo, Sanjay Khobragade,” no fangatahana nataon'i Pradeep zanakalahin'i Khobragade, izay milaza fa ” fantatsika rehetra fa amin'ny famonoana ny raiko, te-hanome ohatra ho an'ny Dalita ny amin'ny tsy tokony hitenenany ny sokajy ambony.”
Asongadin'ny Video Volunteers ny fifanoherana ao anatin'ny fanadihadian'ny mpitandro filaminana momba ny famonoana an'i Khobragade:
Ohatra ny hoe miray tsikombakomba manao izay hanafenana ilay herisetra natao tamin'ilay Dalita ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Distrika sady nokajiana tsara ny hampisongadinana io vonoan'olona io hoe tsikombakomba avy amin'ny fiarahana amin'olon-kafa ivelan'ny fanambadiana.
Nilesh Kumar, mpikaroka ao amin'ny Ivontoerana Tata momba ny Siansa Sosialy any Mumbai no nandinika tatitry ny fanadihadiana nataon'ny ONG Round Table India ka nanao tsoakevitra hoe :
Mora atao lasibatra mandrakariva ny vehivavy Dalita, ny vatany, ny toetrany. Ny vehivavy Dalita foana no iharan'ny ratsy indrindra raha vao rsaha habibiana eo amin'ny sokajim-piarahamonina. Tranga tahaka izany no miseho eto. Mba hiarovana ireo tena nanao ny heloka dia i Devakabai no nataon'ny mpitandro filaminana ho lasibatra. Namorona tantara tsy nisy ry zareo ary niampanga azy ho nanao sipa. Vehivavy 48 taona nampangaina nanao firaisana taminà lehilahy 41 taona, mpiara-monina aminy. Tamim-pahamalinana no nangalan'ny mpitandro filaminana olona vitsivitsy amin'ny sokajy ambony mba hanamarina izany.
Namoy ny ainy noho ny ady tany i Khobragade araka ny voalazan'ny Round Table India. Isan'ireo nitarika ny Dalita avy any Kavalewada tamin'ny fanentanana ny fananganana ivontoeran'ny vondrona Bodista eo amin'ny tany natolotry ny fitondrana azy ireo tamin'ny 2012 izy. Tsy nanaiky io drafitra io anefa ry zareo ao amin'ny “sokajy ambony”, ny vondrom-piarahamonina Hindo izay te-hanorina ny tempoliny manokana teo amin'io ampahan-tany io ihany koa.
Raha ohatra ka tsy natao hihasara mihitsy ny fiainan'ny Dalita sy ireo “maloto” sasany, dia hiaina tantara mampihorohoro tahàka ny an'i Khobragade foana ny vahoaka. Indrisy anefa fa kely fotsiny ny fandrakofana nataon'ny haino aman-jery Indiana momba ny famonoana feno habibiana nanjo azy . Raha toa ka ampy irery ny fiarovan'ireo lalàna sy ny lalàm-panorenana handiovana ny Indiana amin'ny fahalotoany dia mety mbola velona teo i Sanjay Khobragade androany.